Ihe nkiri M Bụ Akụkọ Mgbe Ochie - Afọ Dị A theaa Ka Omume ahụ Na-eme | TeraNews.net
Ihe nkiri M a Akụkọ Mgbe Ochie - ihe afọ ka ihe omume na-ewere ọnọdụ
na-ede akwụkwọ Nikitin Eugenius E bipụtara 16.01.2021
Okwu dị ọkụ na ntanetị mmekọrịta na mmalite nke 2021 bụ ọgwụ mgbochi COVID na nsonaazụ ya. Ndị ode akwụkwọ ndị a na-etinye foto nke gosipụtara isi ihe nkiri a bụ "Abụ m Akụkọ Mgbe Ochie". Mbinye aka na-azọrọ na na 2007 onye isi ihe nkiri ahụ buru amụma banyere ọdịnihu n'amaghị ama. Dị ka o kwesịrị ịdị, ajụjụ bụ isi na nchọta ọchụchọ Google - ihe nkiri "Abụ m Akụkọ Mgbe Ochie" - na afọ ole ihe ahụ na-eme.
Gịnị bụ ihe nkiri a - "Abụ m akụkọ mgbe ochie"
Maka ndị na-elebeghị, nke a bụ ihe nkiri utopia banyere ụwa mgbe adị ndụ gachara. Foto a na-egosi ụwa anyị n'ọdịnihu dị nso. Mgbe mpụta nke nje dị egwu, ndị niile bi na mbara ụwa nwere mmụba. Ihe dị ka 90% nke ndị mmadụ nọ na mbara ala nwụrụ, 9% tụgharịrị na zombies na-atụ egwu ìhè. Na 1% nke ndị na-enweghị nje ahụ na-anwụ ma na-anwa ịchọta ibe ha. Ọ dị mma ile anya otu ugboro karịa ịgụ nkọwa ahụ. Nke a bụ nnukwu ihe nkiri - nkata, eserese, ime olu. Emechara, Will Smith nọ n'isi ọrụ.
Ihe nkiri "Abụ m Akụkọ Mgbe Ochie" - na kedu afọ ihe a na-eme
Ka anyị laghachi na netwọk mmekọrịta na posts na ha. Ndị dere ihe osise ndị a na-emesi obi ike na nkata nke foto a na-egosi, dị ka onye edemede dere na 2021. Mana ozi a bụ ụgha. Enwere ike ịnụ akụkọ ndị na-esonụ mgbe ị na-ele ihe nkiri ahụ:
Nje virus, nke mepụtara iji gwọọ kansa, ghọrọ ọnwụ mmadụ na 2009.
Enweghị ọgwụ mgbochi ọ bụla megide nje ahụ - onye isi ya mepụtara ihe nkiri ahụ dum.
3 afọ mgbe ntiwapụ nke nje ahụ (nke a bụ 2012-2013), protagonist (US Army virologist) na-anwa ịchọta ọgwụgwọ.
Adịgboroja na ya pụta n'ihi na psyche
Nke ahụ bụ, ihe ndị a niile dị na netwọkụ mmekọrịta adịgboroja... O doro anya ihe ndị edemede chọrọ iji nweta. Egwu ma ọ bụ mee ka onye na-agụ ya nwee obi ụtọ. Fọdụ ga-eji ọkwa dị egwu were ọkwa ahụ, ebe ndị ọzọ ga-achọ enyemaka ngwa ngwa. Kwesịrị ị na-elele ozi mgbe niile. Enwere ọrụ Google dị ebube. Jụọ na ọchụchọ - Nkiri "Abụ m Akụkọ Mgbe Ochie" - na afọ ole ihe a na-eme. Na azịza ajụjụ gị. Nke ka mma, lee ihe nkiri ahụ n'onwe ya. Ọ na-atọ ụtọ ma na-akụzi ihe.
Site n'ụzọ, eserese "Abụ m akụkọ mgbe ochie" nwere njedebe 2 dị iche iche. Ihe a na-akpọ mgbe niile na onye isi nchịkwa. Naanị nkeji 5, mana lee ntụgharị. Ndị otu TeraNews nwere mmasị karịa onye ntụzi aka nke ọma. E kwuwerị, ngwụcha obi ụtọ na fim ahụ dị oke mma. Fans nke utopia na Fans nke ihe genre ga-ahụkarị mbipute ahụ n'anya. Anyị ga-eme na-enweghị a spoiler. Obi ụtọ na-ele.
Digital mkpịsị aka usu Oximeter
Netflix usoro anime Yasuke na-echere onye na-ekiri ya
The pink super moon bụ eke onu
Ofda nke Metal - Award Academy maka Sound kacha mma
Mortal Kombat 2021 na-ekwe nkwa ịbụ ihe nkiri kachasị ike nke afọ
Sharp Aquos R6 ekwentị igwefoto na Leica optics
Norton 360 antivirus mụtara m egwupụtakwa Ethereum
Mmelite ihe nchọgharị nchọgharị Mozilla Firefox
Nnukwu Hadron Collider dị njikere maka nyocha
Nchịkọta nke ọnwa - Nzọụkwụ Mbụ nke Amazon
GAZ-51, nke na-agbago ngwa ngwa gaa 205 km / h